Shina : Famoronana tarehintsoratra Han vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2019 5:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Español, Deutsch, English
Vao tsy ela akory izay no nanambara ny firindran’ny endriky ny sarin’ny tarehintsoratra Han miisa 44 ny Minisiteran’ny fanabeazana ao amin’ny Repoblika Entim-bahoakan’i Shina. Tsy dia nisy dikany loatra sy tsy nisy antony akory ny fanovana ka maro ireo mpisera Aterineto no niampanga ny Minisitera amin’ny famoronana olana [ izay tsy nisy akory]. Na ny Xinhua news aza dia niresaka momba ny ‘’fandidiana fanatsarana endrika’’.
Na izany aza, ity fanambaran’ny Minisitera ity dia nanome aingam-panahy ny olona maro, izay nanapa-kevitra ny hamorona ny tarehintsoratra Han vaovao. Ahitana taratra ny kolontsain’ny aterineto sy ny fahadisoam-panantenana teo amin’ireo mpisera aterineto any Shina izany.
Nahita teny vaovao miisa telo avy amin’ireo mpanoratra samihafa i Egaobaike.
Tononona hoe ‘’Nan’’ ny voalohany. Izy io dia ahitana litera Han miisa roa: ‘’fahasimban’ny ati-doha’’ raha adika ara-bakiteny.
Ity dia fiteny iray iraisana ampiasaina ao amin’ny Aterineto mba hitsikerana ny tsy fahafahan’ireo tanora tia tanindrazana hisaina ao anatin'ny fahaleovantena.
Tononona hoe ‘’Wao’’ ny faharoa, izay ahitana 五毛 ary midika hoe 50 santima [ Shinoa]. Manondro ny vondrona mpaneho hevitra izay karamain'ny governemanta na ny Antoko Komonista Shinoa (PCC) izany mba hanova ny hevitry ny daholobe amin’ny alalan’ny fanehoan-keviny ao amin’ireo tranonkala sy ao amin’ireo sehatra fifanakalozan-kevitra tena mahaliana.
Tononona hoe ‘’Diang’’ ny farany, izay ahitana teny miisa telo 黨中央, izay midika hoe Komity foiben’ny PCC. Manamarika ny tonga lafatra tsy misy fahadisoana ara-politika ity teny vaovao ity izay voarara ny misalasala aminy.
Mazava fa io hala-tahaka io dia vazivazy maizina manoloana ny fanjakazakan’ny PCC. Raha ny marina, nisy ireo mpisera Twitter sasany no nitatitra fa ny tarehintsoratra fahatelo ‘’ Diang ‘’, izay noforonina omaly, dia efa ‘mirindra’ [ voahitsy na voasivana tao amin’ny Aterineto] sahady.